Sir Culus Xabsiyada Itoobiya oo La Ogaaday Xaqiiqadooda. | ogaden24
Sir Culus Xabsiyada Itoobiya oo La Ogaaday Xaqiiqadooda.
Jun 10, 2018 - Aragtiyood
Xog rasmi ah oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in xabsiyo aad ubadan oo dadka shacabka ah lagu ciqaabo oo aan la aqoonin ay kuyaalaan guud ahaan wadanka Gumaysiga Itoobiya Gobol ilaa Dagmo.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa dibada usoo baxay qaar kamid ah dhagartii gumaysiga gaamuray ee Itoobiya, waxaana la ogaaday Hotello iyo dhakhaatiir ay xabsiyo waawayn kafuran yihiin, kuwaas oo dad aad ubadan lagu ciqaabo.
Indergachew Sige oo ahaa hogaamiyihii hore ee Jabhada Ginbot 7 oo dhawaan xabsi kuyaala Itoobiya laga siidaayay ayaa sheegay in uu mudo dheer kuxidhnaa xabsi dhulka hoostiisa ah oo kuyaala dabaqa hoose ee Hotelka caanka ah ee Giyen Hotel, kaas oo kuyaala magaalada Addis Ababa.
Indergachew Sige ayaa sheegay in xabsiyo badan oo aan la aqoonin ay jiraan kuwaas oo laga sameeyay meelo aan laga filaynin sida Hotello iyo Dhakhaatiir iyo waliba xafiisyo, wuxuuna Indergachew sheegay in dad badan oo hada la la’yahay ay kujiraan xabsiyadaas uu tilmaamay.
Sidoo kale siyaasigan oo mudo 4 sano ah kujiray gacanta Gumaysiga ayaa sheegay in dad aad ubadan oo aan laqiyaasi karin ay kudhinteen xabsiyadaas qarsoodiga ah, wuxuuna intaas kudaray in dadka sida gaarka ah loociqaabayo lageeyo xabsiyada qarsoodiga ah.
Arintan ayaa noqotay ceeb wayn oo kusoo baxday taliska wayaanaha iyo wuxuushta uu ku adeegto, waxaana aduunka u cadaatay in dadka shacabka ah ee Itoobiya kudhaqan ay kujiraan gacan dad manaxayaal ah oo sharciga kutunta.